88 Bogag Tusaalooyin ah si loo abuuro Resumeyga Wanaagsan | Waxaan ka socdaa mac
88 Bogagga sheybaarada si loo abuuro resume-ka saxda ah
Markaad abuureyso dukumiinti aad ka soo bilawday, waxay u badan tahay in haddii aanaan aad u jeclayn naqshadeynta, ay nagu qaali noqon doonto argagax si aan u bilowno qorista hal eray. Nasiib wanaagse, waan adeegsan karnaa sheybaarrada si aan u bilowno inaan fikrad ka helno waxa aan u baahan nahay. Mawduucyadu waxay noo oggolaanayaan inaan wax ka beddelno dhammaan dhinacyada dukumiintiga, iyaga oo u gaar ah sidii inay iyagu yihiin. In kastoo Microsoft Word waa codsiga ugu fiican ee laga heli karo suuqa oo aan ku abuuri karno nooc kasta oo dokumenti ah, Apple Pages sidoo kale waa beddel dhab ah, gaar ahaan hadda markay gebi ahaanba xor u tahay dhammaan isticmaaleyaasha haysta Apple ID.
Marka ay timaado sameynta dib u bilaabida, oo uu yiraahdo qof wax badan ku arkay noloshiisa oo dhan shaqadayda, waa in maanka lagu hayaa inay ku saabsan tahay bixinta macluumaadka ugu badan meesha ugu yar ee suurtogalka ah, macluumaad muhiim ah, sidaa darteed in mar aan tagno wareysiga shaqada waan ballaarin karnaa xogta la xiriirta aqoonteenna iyo shaqadii hore. Intaa waxaa sii dheer, sharraxaadda isku mid ah waa inay ahaato mid soo jiidasho leh oo awood u leh inay marin u hesho dhammaan macluumaadka si dhakhso leh iyadoon waqti badan ku lumin.
Resume Mate - Naqshadeynta naqshadaha Boggaga ayaa ah xalka ugu habboon ee baahiyaha abuurista resume fiican. Codsigan wuxuu na siiyaa illaa 88 noocyo tayo oo kala duwan, sheybaarro aan ku habeyn karno dhammaan dhinacyada si loo waafajiyo baahida dhammaan isticmaaleyaasha. Resume Mate - Mawduucyada naqshadeynta ee Boggaga waxay leeyihiin qiime caadi ah oo ah 4,99 euro, laakiin wakhti xaddidan ayaan ku soo dejisan karnaa bilaash. Waxay u baahan tahay macOS 10.10 ama ka dib iyo processor 64-bit ah. Booska loo baahan yahay in lagu rakibo codsigan waa 180 MB oo waxaan ku soo dejisan karnaa xiriirka soo socda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Barnaamijyada Mac » 88 Bogagga sheybaarada si loo abuuro resume-ka saxda ah
Waa laga saaray, ma jirtaa wado lagu helo hadda? Aad ayaad u mahadsantahay
AudioNotes waa codsi cusub oo lagu duubo qoraalada maqalka ee Mac-ga
Haddii aan ku rakibo diskka SSD-ka Mac-ga, miyay tahay in aan qaabeeyo TRIM?